ikhaya » iindaba » I-Tedial ye-World-Class MAM Solutions Thatha iNqanaba leZiko kwi-IBC 2017
I-Tedial ye-World-Class MAM Solutions Thatha iNqanaba leZiko kwi-IBC 2017
Umlinganiselo we-TV kaMan McDonnell uza kwenza i-Evolution Live Event Archive Solution Presentation Tedial yima 8.B41 ngoMgqibelo16th NgoSeptemba 2017 kwi-10.00am
Amsterdam, IBC 2017, Yima 8.B41 – Tedial, i-MAM yezobuchwepheshe ezizimeleyo, isisombululo sezobuchwepheshe, iya kubonisa izixazululo ze-MAM ezikhokelela kwi-IBC 2017. Oku kuya kubandakanya ukujonga kuqala kwinkampani entsha Tedial Isisombululo se-Evolution Live Event archive ngokusebenzisa umboniso nguDan McDonnell, uMlawuli oyiNtloko Ixesha loThuculo, eya kuqhutywa ngoMgqibelo 16th Septemba 2017 ngo-10.00am Tedialukuma kwe8.B41.
Tedial kwaye EVS, inkokheli yekhnoloji yokuvelisa imveliso esandul EVS'uphila i-asset management management suite, IPDirector, kunye Tedialinkqubo ye-MAM ye-MAM, i-Evolution. I-TV esekelwe kwi-Timeline Television ngumboneleli wokuqala weziko lokuphumeza EVS / Tedial isisombululo esidibeneyo sokunikezela isivumelwano seminyaka emihlanu ukubonelela ngenkonzo epheleleyo ye-digital archive ye-ITV Sport. Ukuxhasa uhambo lweMidlalo ye-ITV 'yokujika ngokukhawuleza komsebenzi wokuveliswa kwemveliso, ukuhlaziya, iziqulatho kunye nezicatshulwa ezenziwe kwiiNgingqi zemihla ziya kugcinwa ngokukhawuleza kwi-Archives ye-ITV. UMcDonnell uya kuqhuba ingxoxo malunga nobuchule obuhlukile Tedial isofthiwe yokuphucula nokwandisa i-archive enkulu yemidlalo.
"Sinovuyo kakhulu ukunika iindwendwe kwi-IBC 2017 ukuba sibe nombono wokuqala kwi-entsha yethu Tedial Isisombululo se-Archived Live Event, "kuchaza uEsther Mesas, Tedial CMO / CSO. "Le yinzuzo enkulu yezibonelelo. Ngokubonelela ngokudibeneyo phakathi EVS uphila uveliso lomsebenzi kunye Tedial Inkqubo ye-MAM, amaziko angenza iindleko ezinkulu zokuvelisa indleko. "
INkokeli yehlabathi kwi-MAM yoLwazi
IBC 2017 Tedial ziya kuqhubeka nokugqamisa ubunkokheli bezoshishino kwiinkqubo ze-MAM zokuhambisa umsebenzi, ukuphathwa kunye nokupakishwa kokuhambisa, kuquka ukuguqulelwa, i-OTT, i-VOD kunye nokuhanjiswa kwe-intanethi. Tedial Izixhobo ze-MAM ze-Evolution ziquka ihlabathi elikhokelayo I-Evolution Version Factory kwaye Tedial Ubunkokheli kwi-software entsha. Iimveliso zayo kunye nobuchule benzile Tedial Umqhubi wehlabathi ophezulu kwiinkampani ezininzi, ukusasazwa kwamashishini.
Ukugxininisa ekusebenzeni, Tedial iya kubonisa ukuphela komsebenzi wokugqibela osebenzayo (IMF) osebenzayo SMPTE imigangatho yokubonelela ngokuthembekileyo kwindawo kunye nesisombululo sefayile yeHalaS eqinisekisiweyo yezicelo zokuhambisa umhlaba. Uxhumeke kuyo TedialI-Evolution Version Factory, ihlabathi elilodwa kuphela / elingenamkhawulo lokuphumla komsebenzi wolwazi lokuhambisa ukusasazwa, le nkonzo isinika isindleko sokugcina isityalo se-IMF kunye nokuqhutyelwa komsebenzi wokuphela komsebenzi. Ukulawula i-OTT, i-VOD kunye nokwabiwa kweendaba ezikhethekileyo. Tedial I-architecture isekela i-UHD kunye ne-HDR kwaye inikezela abalamkeli ngokuxhaswa kwe-multi-versioning inkxaso, kwaye iyakwazi ukujongana nexesha elilindelekileyo kwimimiselo yee-watermarked versions.
Izixhobo zeDevboard yeDevboard I-Real-time Statistics kunye nokuBika
Ukubeka esweni isigxina kuyimfuneko yokwandisa ukusebenza kakuhle kwezebhizinisi kunye nokuzuza. Tedial Ukuguquka kwemvelo Izixhobo zeDevboard yeDevolution, eziza kuboniswa kulo mboniso, vumela ukunyamekwa kwexesha lokwenene kwezibonakaliso zokusebenza eziphambili kunye nezixhobo zokunika ingxelo ukulinganisela ukusebenza kwekhishini kunye nokukwazi, ukuvumela abasebenzisi ukuba balandele iinkqubo zoshishino kwaye bancede abathengi bafinyelele iinjongo zabo.
UkuThuthukiswa okungabonakaliyo (AST)
Ukujongana neemfuno zabaxumi bezentengiso ezininzi, Tedial Uyaqhubeka nokwandisa umgca walo mveliso kunye nenqanaba elilandelayo kwi-Hierarchical Storage Management UkuThuthukiswa okungabonakaliyo (AST), Indlela ekhuselekileyo yokulawula ukugcinwa kwemigangatho yokugcinwa kwamasebe okanye nakwamanye amazwekazi.
I-AST izisa abanikazi bokuqukethwe inkqubo yokugcina ekhuselekileyo, ethembekileyo neyindleko yokusebenza kwamafu kunye neemeko ze-hybride njengoko ikhetha indawo zefayile. Kwabo bathengi abalawula isayithi ezininzi, ukuhanjiswa kwemisebenzi, i-AST ikwazi ukulawula ngokungafani umxholo ofanayo kwiindawo ezininzi, ngokuzenzekelayo isabelo somsebenzi kunye nokudluliselwa kwedatha njengoko kuyimfuneko. Ukuqulunqwa kwayo kunye ne-Scallable "Cloud First" ivumela ukuba izixhobo zikhule ngokwezidingo zazo, zilungele ukulungelelanisa umthwalo wokusebenza, kwaye inika inqanaba eliphezulu lezokhuseleko ukukhusela umxholo kunye nokunciphisa ukufikeleleka kwabo bavunyelwe kuphela.
Ukusebenza ngokupheleleyo kwiLu
Tedial Uhlinzekela inkxaso yasekuhlaleni imisebenzi yefowuni nefu ye-hybrid iminyaka engaphezu kweyesithandathu kunye nokufakela ezininzi kwihlabathi jikelele. Ngenxa yokuphucula okuqhubekayo kwizicombululo zayo, TedialUmsebenzi ogcweleyo kwi-Cloud ngoku unomlinganiselo wokuphambanisa i-MPEG-DASH ukwenzela ukunika i-GUI epheleleyo ye-Web ngaphandle kwemicimbi yokukhangela imidiya, kwaye idibanise ngokupheleleyo kwi-Adobe Premier Pro CC, i-Adobe After Effects, kwaye QAPHELA KwiMidiyam Central. Isiqulatho sisetyenziselwa kwaye sihanjiswe ngokuzimeleyo kwendawo yokugcina indawo, ukuvumela ukuhanjiswa okuncinci kwimisebenzi ephezulu yokusebenza njengendawo yokukhutshwa komxholo, izilungiso, njl, ukwenza umxholo ufumaneke ngokungafihli kubasebenzisi bokugqibela, kungakhathaliseki indawo.
Abaphathi beenkampani baya kuchaza indlela TedialInkqubo yokwakha izakhiwo zenzelwe i-Cloud ngeziseko ezinokwakheka kwezimo kunye nenkxaso yaseMzantsi S3.
I-17 iminyaka yobunkokeli bubugcisa
Tedial Uyinkonzo ekhokelayo yeMedia kunye neCandelo loLawulo lweZigqibo ezenzelwe ukwandisa ukusebenza kakuhle kwezebhizinisi kunye nokuzuza.
I-platform ye-Media IT eyamkelekileyo, Tedial Ukuziphendukela kwemvelo, kunika abapapasho bamazwe ngamazwe kunye neenkampani zeendaba zehlabathi jikelele kwisizukulwana esilandelayo kwi-MAM kunye nokuqhutyelwa komsebenzi weendaba. Iyakwenza i-news-end-media-platform ekutshitshiseni ukulungiswa kwemidiya kunye neenkcukacha kwi-chain chain. Oku kunika abathengi ngamathuluzi angabonakaliyo anokwenza ixabiso elifanelekileyo libavumele ukuba banyuse i-media yabo ekuhambeni komgca ngejubane elingalindelekanga apho ukusetyenziswa kwamabonakude kunyuka ngonyaka ngonyaka. Tedial Ukuziphendukela kwemvelo kwenzelwe ukuqinisa indawo yokusebenza yokusebenzisana kwaye uqhube umsebenzi osebenzayo, ii-VOD kunye ne-OTT iinkonzo.
Tedial Yinkampani yehlabathi jikelele ngokuqhubekayo, ihambise ngempumelelo inkqubo ye-MAM / i-Work Management Management systems.
US Tedial Qha ga mshelana:
Inombolo: + 1 (424) 645-5300 x 602
UQhagamshelwano lwamazwe ngamazwe:
Inombolo: + 44 (0) 1932 240001
I-Mob: + 44 (0) 7740 948065
Qhagamshelana US PR:
Inombolo: + 1-845-512-8283
Iseli: + 1-914-263-0613
Ukususela kwi-1994, i-Desert Moon Communications iye yasiza ukuqala, kunye nenkampani ezikhokelayo zenza umxube kwaye zihlale "ingqondo engaphezulu" kwimeko yoshishino ngokutshintsha ngokukhawuleza.
Sinobudlelwane obuqinileyo kunye nabavakalisi bezoshishino kunye nabahleli ukuxhasa imizamo yethu egameni lakho kunye namazinga ad adisayo kakhulu kunye nokufakwa kwamalungiselelo. Siziqhenye ngokuba sele siphumelele ukufikelela kwenkcazo epheleleyo, ukufakwa kwezibhengezo eziphambili, kunye nezindleko ezininzi zoshishino kubaxhasi bethu.
• I-Video yeNgcali
Â € ¢ Ukusasazwa
Â € ¢ IVidiyo zeVidiyo
• Uthutho lweposi
Â € ¢ Udibanise iTV
Â € ¢ Idijithali yokuGqirha
Â € ¢ Ikhefu
Â € ¢ Ithempyutheni
Iqela leDesert Moon lizinikezele, izixhobo zengcali zifumanekayo ukunceda inkampani yakho ifinyelele iinjongo zayo, kwaye ke ezinye. Silapha ngenxa yenu!
I-RUSHWORKS iyaqhubeka nokwandiswa kwehlabathi jikelele kunye nomthengisi omtsha waseRashiya - Julayi 5, 2018
I-DigitalGlue idibanisa i-Paradigm yoLondolozo lweMedia oluqhelekileyo kunye nokuqaliswa kokudala - Meyi 20, 2018
UJulián Fernández-Campón Uthelekelelwe ukuza kwi-SMPTE 2018 Bits By The Bay - Meyi 20, 2018
ukudityaniswa I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw MAM SMPTE SoftAtHome, MStar, iCES2017 Tedial ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD	2017-09-13
Previous: I-Dalet Showcase Xtend Panel ye-Adobe Premiere Pro CC
next: I-EditShare Yongeza Ubuchule bokuphicothwa okuPhezulu ngokuSetyenziswayo koKhuseleko oluSetyenziswayo, Ukugxininisa ukhuseleko lweeNkampani zeMedia kwi-IBC2017
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Tedial ye-World-Class MAM Solutions Thatha i-Stage Centre kwi-IBC 2017". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/tedials-world-class-mam-solutions-fake-centre-stage-at-ibc-2017/. Enkosi.